Indlela yokuphuza i-absinthe. Izindlela zendabuko nezanamuhla zokusebenzisa i-absinthe.
Indlela yokuphuza i-absinthe
Cishe zonke iziphuzo eziphuthumayo zingaziqhenya ngamasiko azo, futhi i-absinthe ayiyona into. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukuphuza i-absinthe eluhlaza, ngaphandle kwalokho awukwazi nje ukuhlala unganelisekile ngokunambitha, kodwa futhi ungalimaza impilo yakho. Leli "potion" elikhethekile futhi eliyingozi, okuzungeze ukuthi kunezinganekwane eziningi. Okudume kakhulu kubo - ukuxhashazwa kwenza umuntu abone "i-Fairy Green". Uma uhumusha leli qiniso libe yiqiniso elibi, khona-ke insizi ivele ivele ihlushwa yizindinganiso, futhi, njengokwenza umkhuba, akuyona eyona ehamba phambili. Ukuvimbela lokhu kungenzeki, kufanelekile ukuphenya ukuthi yiziphi izisebenzi ze-absinthe eziphuzayo nokuthi yiziphi.
Eyaziwa nangokuthi isiFulentshi, futhi kusukela amaFulentshi ngesikhathi esisodwa (futhi manje) kwakungabaqambi bemvelo kunoma iyiphi insimu, baphatha inyoka eluhlaza ngendlela yabo. Ngakho, emaphethelweni engilazi ne-absinthe i-spoon ekhethekile yafakwa endaweni engezansi, lapho ubeka ucezu ushukela. Ingcezu, hhayi i-granule encane! Khona-ke ushukela wathululelwa ngamanzi e-iced kuze kufike amanzi e-emerald akhula. Lokhu kusabela kuchazwa ukuthi amanzi abandayo adonsa amafutha abalulekile ophuza kuze kube phansi. Uma behla, utshwala buzoba lula ukuphuza.
Kunombono wokuthi uma usuthela ushukela ngamanzi amnandi abandayo, kuzoqinisa isenzo se-thujone, into ekhethekile ephendula inselelo ye-"Fairy Green" evamile. Kodwa-ke, akekho oye wafakaza ngesayensi ngalesi sizathu, futhi labo abaqhuba ukuhlolwa abakwenzile abanethonya elijulile kwisayensi yesayensi.
Ama-spoonful for absinthe kufanele akhulume ngokwehlukana. Leli ithuluzi elikhethekile, elisungulwe ikakhulukazi emikhosini ye-absinthe. Njengoba indlela ye-classical ivela eFrance, ungacabanga ukuthi yiziphi izinkezo ezenziwa amakhosi wendawo! Lezi kwakuyimisebenzi yangempela yobuciko, ehlotshiswe ngemidwebo eqoshiwe namatshe ayigugu. Namuhla, izinkezo nezimbobo zenza kube ngcono kakhulu futhi kuyasebenza.
Indlela elula futhi "esheshayo". Naphezu kokuqala, akufanele wonke umuntu. Ukungabikho okuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho (ochwepheshe ekusetshenzisweni komhlonyane wokutshala umhlonyane) kuqala ukupholisa ukushisa kwezinga, bese uthele izibuko ezincane futhi uphuze ku-gulp eyodwa. Ukukhonzwa okuphakanyisiwe kungu-30 g.
Enye yezindlela eziphumelela kakhulu nezithandwayo. Esikristini ingxenye yesine ithulule i-absinthe, gcoba i-cube yeshukela elicwengekile bese uyibeka phezu kwekhasi, efakwe emaphethelweni eglasi. Hlanganisa ushukela bese ulinda ukuba ushise okwesikhashana. Ngesikhathi ukhumbula i-flame enhle yama-bluish, u-refiner uyancibilika, ajike phansi engilazi. Uma eshisa, hlanganisa okuqukethwe ingilazi ngesipuni, engeza ukunambitheka kwamanzi e-ice uphuze.
Sikunikeza ividiyo yokuphuza i-absinthe ngendlela yaseCzech.
Indlela "i-parachute eguquliwe"
Iyindlela ethakazelisayo, nakuba ilula kancane. Ngenxa yalokho, isiphuzo sinomuzwa omncane, umuntu uyashisa, futhi ukuhamba kancane kancane.
Esikristini sewayini se-cognac uthele 40 ml we-tincture. Esikristini i-whiskey uthele u-45 ml wejusi noma i-tonic futhi eceleni kwehla kulo. Khona-ke i-absinthe ishaywa futhi iphenduka kancane kancane, ukuze ingilazi yewayini ingabhubhi. Ukuphuza okuphuzwayo ngokucophelela kuthululwa engilazini ye-whisky, ikhava ngilazi ukuze umlilo uphume. Ngemuva kwalokho, gxuma kancane umshini bese ufaka ithubhu emgodini ngokushesha ukuze uphuthukise ama-vapor. Ukubhema okungekho emabhokisini kufanele kuphefumlelwe yikhala, futhi kuphuma emlonyeni, ngaphandle kwalokho ungashisa i-larynx. Ngesikhathi usubhema, ushukela uhlelwe ku-saucer (usuqaphele ukuthi awukwazi ukubhekana nale "parachute" enjalo kuphela), obanjwe i-absinthe. Uma ekuqaleni uhlanjululwe i-absinthe ijusi, usuqedile lo mbhangqwana, uyiphuze nge-volley. Uma ukhetha ukusebenzisa i-tonic noma i-sprite, kungcono ukushaya itafula ngesilazi, njengokungathi uphuza i-tequila-boom.
Ngesikhathi uqeda ukuphuza utshwala, i-barman idonsa i-brandy phezu kweshukela elicwengekile, bese uyihlanganisa ngilazi, igweme ukufinyelela kwe-oksijeni, kuyilapho isentimitha esivela ku-saucer ukuqhuma kwe-mini kufanele kwenzeke ngenxa ye-flare yegesi. Khona-ke, faka ipayipi ngaphansi kwe-brandy bese uphinde ubheme iziphunga. Kungabonakala ukuthi le ndlela iwukuba namandla emoyeni nasemzimbeni, ngoba kuze kube sekugcineni ukubhema kokubili kwamaphule "bukhoma" amayunithi, kodwa umphumela walendlela awukwazi ukuqhathaniswa nanoma yimuphi omunye! Ukuphuza i-absinthe kunqunywa yibo bonke abantu, kodwa noma kunjalo Kufanelekile ukuthathwa yisiphuzo semilingo, ngaphandle kwalokho "i-Fairy Green" izokuholela embusweni wayo we-emerald kuze kube phakade.
I-Jensen - imishayeli yokulala ebukhosini
Indlela yokugeza izingubo ngendlela efanele
Imithwalo yama-orthopedic nama-mattress
Indlela yokunakekela amakhowe wetiye
Ukuthokoza okukhulu: senza amakhadi ngePhasika ngezandla zethu
Uzoba yini ngonyaka ka-2017 wezibonakaliso zezinkanyezi: izibikezelo ezivela kuPaul and Tamara Globa, Vasilisa Volodina
Ukuthuthukisa amathangi omncane kunabo bonke
Ukubheja ngokobulili njengengculazi
Izindlela eziyisikhombisa zokunqoba ukucindezeleka kumama ozayo
Yini ongayinika osebenza naye ngoFebhuwari 23
I-henna engenambala ngobuhle nempilo yezinwele
"Madagascar 3" - hhayi kude
Isimo sezempilo esibi lapho ingcindezi yomoya ishintsha
Ukubuyekeza kwe-movie "Umama: Ibhomu LeNkosi Yamakhosi"
Ukwenza izikhumbuzo ezivela engilazi
Indlela yokudala isithombe sakho esisha
Isaladi elayishiwe ne-inkukhu yesibindi
Ukuhluleka kwamahomoni: izimpawu, imiphumela, izimbangela, ukwelashwa
Baba, Mama, ngingumndeni oseduze
Indlela yokuxazulula ukungqubuzana nomyeni wakhe
Isobho nge-porcini amakhowe kanye noshizi ocibilikile